In chii bhangi unogona kuwana shanduro "Unistream"? Partner Banks Russia uye Europe
Munyika mune vazhinji mari kuchinjirwa hurongwa "Western Union", "Privatmani", "Union Express", "Unistream" uye vamwe. Mumwe nomumwe wavo ine zvakanakira nekuipira. The nemhosva, uyo haasati nekusangana kutuma mari, vanofanira kuziva chaizvoizvo iyo kubhengi kuwana shanduro "Unistream" kana imwe shanduro (kana wasarudza zvakasiyana hurongwa).
How kusarudza kutamira kune wacho akanga asina dambudziko kutora mari? Iva nechokwadi yatumira anofanira kuziva umo musha achawana mari. Danho rechipiri - kuona izvo Banking zvikoro anomiririrwa muguta rino kana musha. Ipapo yatumira anoenda Websites pamusoro mabhanga aya, zvinoita kuti aone kana paine mashoko pamusoro "Unistream". Shanduro, Bank hofisi nzvimbo mune rimwe munharaunda vachange hazvo kuti uratidzwe pamusoro Websites ose nemasangano. ruzivo urwu kuchabatsira kudzivisa kusanzwisisana.
In chii bhangi unogona kuwana shanduro "Unistream" muna Russian?
chinja maitiro "Unistream" zvinowanzodavirwa anomirirwa mune Russian mari mapazi. "Unistream" basa wemuTesitamende Russia inosanganisira anenge 185,000 pfungwa (ichi kubhengi mapazi uye kuzvidzora basa zviteshi mu zvitoro, panguva bhazi uye chitima zvechitima).
Basic Bank - CB "Unistream". Financial sangano chakagadzirwa hofisi kunobva muMoscow, pamwe nemahofisi riri muRussia yose, munewo bhengi mahofisi muUkraine dzakavakidzana. Mukuwedzera, vokuRussia achakwanisa kutumira nokugamuchira mari kuburikidza "Unistream" iri mabhanga akadai: Bank "Uniastrum Bank" JSC, "remarara", JSCB "mari Bank". System vakaroorana naiyowo yave "PTB" CB "Ushamwari", "OTP Bank" (sezvazvakanyorwa kuzivikanwa, chinhu chikuru dzakawanda mari kupfungwa hurongwa), CJSC "Industrial nemari Bank", "Credit Bank of Moscow" nemamwe mabhanga.
The chaizvo kuroora Banks Russia
"OTP Bank" ane yakanaka chaizvo remunharaunda network. Bank matavi dziri mumaguta 44 munyika. Ndiwo sei nzvimbo uye maguta makuru romunharaunda kuti havana remunharaunda hweHIV. Nokuti kuwana yeGmail.END_STRONG anotamisa "OTP Bank" havazogari mari chero mari yechikoro, uye kutumira mari ndiyo 2 chete% uwandu (kutapurirana huwandu haasi kupfuura 100,000 rubles) uye 1.5% uwandu (kana akatumwa vanopfuura 100,000 rubles).
Bank "Uniastrum Bank" sezvo chevanorwara zvemari evasingatombonamati Russian ane zvakawanda mahofisi pane "OTP Bank." Kugamuchira "Unistream" mamiriro Bank ichi? Mhinduro yacho inogona kuwanikwa musi Website masangano. Mahofisi Its dziri mumaguta 70 Russian, kubva Moscow akaguma pamwe Far Eastern Khabarovsk. Kugamuchira kutamira iri mari kana wakasununguka chinouraya zvisinei currency umo mubhadharo akatuma.
Sezvambotaurwa, pane "remarara" kuri kushanda ne "Unistream" hurongwa. Translations (kero zvinhu vane pamahombekombe wacho Website) unogona zvose kutumira uye kugamuchira. Nhongai bhokisi hofisi takaisa mune rimwe guta ringashandurwa pakarepo. uchatamisa muripo, Chokwadi, mahara. Kutumira mari vatengi vachaita mari 1-1.5 chete% of muripo uwandu. The Bank rinomiririrwa munyika dzakawanda.
Kutambira mari ne "Unistream" muUkraine
Hatina vakati kare kuti tiri kufunga dzakawanda chinja maitiro. In chii bhangi unogona kuwana shanduro "Unistream" muUkraine? With ino zvinoshanda akawanda guru Ukrainian mabhanga, saka vanoshuva kutumira kana kugamuchira kutamira handinganzwiri zvachose hapana matambudziko.
Ukrainian "Oschadbank" (akashandurirwa Russian Language- "Sberbank") riri kushanda pamwe maitiro "Unistream" ane makore anopfuura 10. Kunyange zvazvo Bank uye ane zvikuru zvakawanda bazi samambure munyika (6000), kwete pane zvose pfungwa yokushanda pamwe remittances. Asi kuzvuzvungudza ichi hazvirevi kukuvadzwa kupedza kuvhiyiwa nemari kuitira, kunyange pamusoro remunharaunda muzinda diki.
Kudeuka Hurongwa nemabhangi muUkraine - "PrivatBank" Bazi riri muRussia, Georgia, Latvia, Cyprus uye Portugal, uyewo nhengo "Unistream" hurongwa. On the "Privatbank" kugamuchira mari nyore nokuti havatombofaniri kuonana kubhengi bazi. Wana shanduro anogona kunge ane ATM kana kuzvipira basa chinouraya, kana nomukombiyuta "Privat24" paIndaneti hurongwa. Vanoda zvetsika rwezvemabhengi mabasa anogona kushanda kumabhengi 'mari mahofisi.
Vagari kuUkraine, nyanzvi dzinokurudzira kutumira kana kugamuchira mari kuburikidza "Ukreximbank" uye "Raiffeisen Bank Munthanai". Wide zvakarukwa uye akanaka dziine masangano aya vagara kukwezvwa vatengi!
"Unistream" mamiriro: anotamisa upi bhengi Europe unogona kuwana?
MuEurope, kutumira nokutambira remittances "Unistream" ndechokuti zvinogona. Tatotaura pamusoro "OTP Bank" iri akapoteredza Russia, pamusoro "Raiffeisen Bank Munthanai" iri akapoteredza Ukraine. Asi avo chete mabhanga varipo pamusoro misika yemari achitungamirira nyika dzokuEurope! Mukuwedzera, boka French riri kushanda pamwe ino , "Credit Agricole".
Tinovimba ikozvino wose anogona kukurumidza kunzwisisa, "Unistream" vanogona kugamuchira kutamira chero bhengi. Ichi chimwe chezvinhu chiremera dzakawanda mari kuchinjirwa mugadziriro, saka mumwe mutengi anogara vavimbiswe rakavimbika hurongwa.
Mupiro "Rambai" (mari Bank): Kufarira uye mamiriro. Chii interest of mudyandigere mupiro "Rambai" iri Sberbank kweRussia?
Sberbank: Visa Gold somunhu VIP-basa chakarurama
The sangano "Profit Alliance": akaongororazve depositors
Kuzadza nokuti Pancakes chicken, cook uye pizza zvakagadzirwa nyama.
Kutanga rubatsiro rwekucheka. Kutanga rubatsiro rwekucheka
Primary zvinyorwa, zvinhu zvavo
Mhando kuberekesana tsono kuti beginners. Simple knitting tsono: mapikicha, chati uye rondedzero
Zombie Apocalypse: Minecraft mepu, servers uye nemimwe mitambo
Electronics munyaya zvose zvoupenyu
"The Ballad pamusoro kumhara" uye nyeredzi Julia Druninoy
Installation uye zvinokosha configuration nokuda Wine musi Linux mitambo: zvinhu uye vanorumbidza
Skiing muna Finland. Popular plesieroorde
Tsika dze "BMW" discs: photo
Sei Ita uta Hair: Original Ideas